धुर्मु सुन्तु ! तिमीहरु हाम्रो प्यारो नेता बनेर किन जन्मेनौ ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
धुर्मुस र सुन्तली को अभियान लाई कुबेतको नेपाली हरु बाट सहयोग →
श्रद्दाका सलामीहरु अनि धेरै धेरै माया,हिजो तिमीहरु दुबैले डोको भरि ढुंगा बोकेको टेलिभिजनमा देख्दा यस्तो लाग्यो म पनि नेपालमै भएको भए तिमीहरुको पवित्र काममा कति उर्जा दिँदै होस्टेमा हैँसे मिलाउने थिएँ होला, तिमीहरुले बोकेको डोको उठाईदिएर बोझ हल्का पारिदिन्थे होला । तर टाढाको भुगोलमा भएकोले प्रशंसा र सहानुभूतिले मात्र चित्त बुझाउँदै छु ।
अचेल म निरन्तर चिठ्ठी लेखिरहेको छु : राजनीतिका मुख्यमुख्य पात्रहरुलाई तर पनि उपलब्धि शून्य प्राय: छ । राजनीति बिग्रिएको छ उहि कुरा क्षणमै सेतो र क्षणमै कालो भईरहेको छ । सबै जना आफ्नो पोल्टा भर्ने बेलामा तिमीहरु त फेरि भग्नावशेषको वस्ती गिरान चौर पो पुगेछौ गिरेका घरहरु र मनहरु ठाडो पार्न अनि ’emकै ’boutमा मैले लेखिन भने मेरो कलमको धर्म कसरी पूरा हुने भो र ! त्यसैले मध्यरातमा जागेर तिम्रै ’bout केहि प्रशंसा त केहि सहानुभूति र शुभकामनाका वाक्यहरु कोर्न खोजिरहेको छु ।
साँच्चै ! तिमीहरु त बडो बलवान पो रहेछौ, महाभारतको पात्र भिमले जस्तै डोकोभरि ढुंगा बोक्न सक्ने ! तिमीले ढुंगा बोक्दै गर्दा न मैले कुनै अभिनय देखेँ न त कुनै अभिमान : बरु देखेँ त तिमीहरुको दृढ लगनशीलता र अन्तरमनको त्याग । सायद राजनीतिज्ञ हुन्थे भने घाँटीभरि माला र खादाले सजिएर रिबन काट्दै गर्थे होला अथवा दुईचार वटा घर बनाउन पुग्ने रकम हेलिकोप्टर र भत्तामा खर्च गर्थे होला । साँच्चै आज गर्व लाग्छ तिमीहरु ’bout लेख्दा मेरो कलम पनि कति प्रफुल्ल भईरहेको छ । कलमले पनि आज आफैलाई भाग्यमानी ठानिरहेको छ ।
तिमीहरुको शुभचिन्तक दाजु